Fahmaan shaqada diyaarinta fasallada dhaqaalaha iyo ganacsiga ka dib baccalaureate: hababka qorista, content koorsada, furin kala duwan.
Fahmaan shaqada dugsiyada ganacsiga ee mid ka mid ah isku daraa ka dib fasalka diyaarinta dhaqaale iyo ganacsi: tartan qorista, content tababarka, fursadaha xirfadeed.
Haddi aad tahay arday dugsi sare, arday, waalid ama macalin ama aad si fudud u xiisayso, MOOC-gan adiga ayay kuu tahay haddii aad xiisaynayso xiisadaha diyaarinta dhaqaalaha iyo ganacsiga (hore "Prepa HEC") iyo dugsiyada waaweyn ee ganacsiga. Waxaad la yaabban tahay, tusaale ahaan, waxa aan ku baranno diyaarinta, dugsiyadee ayaan isku dari karnaa, maxay yihiin fursadaha guusha, maxay yihiin shaqooyinka aan qaban karno dugsiga ka dib?
Laga soo bilaabo Diyaarinta ilaa Dugsiyada Ganacsiga: koorsada saxda ah ee aniga? Diisambar 13, 2021Tranquillus
READ Aasaaska maareynta mashruuca: Jilayaasha
horeU diyaargarowga dhammaan: ku dhiiran oo guulee
socdaBachelors of Business Schools